Infant Rubhabhatidzo – 2hove
musha / chechi / The sakaramende / rubhabhatidzo / Infant Rubhabhatidzo
Nei VaKaturike bhabhatidza vana vacheche, apo vacheche haigoni kutaura pachavo? anodzidzisa Catholic Church, "Kururamiswa kwedu anobva nyasha dzaMwari. Grace ari tsigiro, akasununguka uye usina rubatsiro kuti Mwari anotipa kubvuma kwake kuti vave vana vaMwari, vokurera vanakomana, vagovani vechimiro cheuMwari uye upenyu husingaperi " (Catechism 1996). The Kubhabhatidzwa mwana, ndiani tadza kunyange vachikumbira kuti vaponeswe, saka, chinoratidza zvakakwana mweya kwakazara kutsamira pamusoro penyasha dzaMwari.
Apo tinoona uchapupu vacheche vakabhabhatidzwa muna emakore okutanga Christianity, hatina kuwana tsika akapikisana kusvikira wevaAnabaptist akaita saizvozvo nenhanhatu remakore.1 VaKristu vanoramba kubhabhatidza vacheche kazhinji vanosimbirira hapana zvakajeka zvomuMagwaro urongwa nokuti. asi, nokuda chete chiratidzo, hakuna chinhu yakajeka wairambidza kunyange. Saizvozvo, kuti Bhaibheri rinoratidza Johane mubhabhatidzi kugamuchira Mweya Mutsvene achiri mukati mudumbu ramai vake anoita nokutsveneswa vacheche pfungwa yeBhaibheri (Luke 1:15, 41; cf.. Judg. 16:17; Ps. 22:10; nekuti. 1:5). Pane humwe uchapupu muBhaibheri uyewo kuti vana vanofanira kubhabhatidzwa. MuEvhangeri, semuyenzaniso, tinoona vanamai kuunza vana vavo vaduku, uye "kunyange vacheche,"Sezvo Saint Luke kutaura, kuna Ishe kuti iye maoko ake pamusoro pavo. Vadzidzi pindira, Jesu anotuka navo, vachiti, "Regai vana vaduku vauye kwandiri, uye musavadzivisa; nokuti ndohwavakadai umambo hwaMwari. Zvirokwazvo, Ndinoti kwamuri, ani naani asingagamuchiri umambo hwaMwari somwana muduku haangatongopindi mahuri " (Luke 18:15-17, and unto.). Arayira boka revanhu paPendekosti kuzobhabhatidzwa, Peter ndizvo, "Nokuti chivimbiso ndechenyu uye kuti vana vako ... wose uyo Jehovha anodana kwaari " (Acts 2:39; kusimbisa yakawedzerwa). Paul anozivisa Rubhabhatidzo sezadziso kudzingiswa, inganzi tsika rinoitwa navacheche (Col. 2:11-12). pakupedzisira, pane zviitiko Rugwaro umo dzimba dzose, zvichida kusanganisira vana vaduku uye navacheche, vanobhabhatidzwa (ona Acts 16:15, 32-33, and unto.).
Kuti vacheche havakwanisi kukumbira Kubhabhatidzwa nokuda pachavo haasi nharo pamusoro kwavo nokubhabhatidzwa. Shure kwezvose, hakuna munhu angauya kuna Mwari pamusoro oga, asi chete nenyasha dzaMwari. Vacheche vari akatsigira mu Rubhabhatidzo, kwete nokutenda kwavo, asi nokuda zvazova kutenda Church, rakafanana mwanasikana waJairosi uyo akaunzwa kubva kuvakafa nekutenda vabereki vake (Matt. 9:25; cf.. John 11:44; Acts 9:40). Kana chipo rwokuzvarwa upenyu anogona kudzorerwa saizvozvi, wadii chipo remweya upenyu? Mucheche achaendeswa yorubhabhatidzo Fonts afanane mitezo yose Matthew 9:2, akatakurirwa nevamwe pamberi paJehovha. Saizvozvo, hapana akanyatsoratidza anoenzanisira yomunhu zvachose kuvimba pamusoro nyasha dzaMwari kuwana ruponeso sezvo Infant Rubhabhatidzo, mwana ari chose havagoni ndichikumbira reMinamato yeChirairo kubudikidza achizvidira (cf.. Catechism 1250). Sezvo akabhabhatidzwa rinouya pakunamata uye mano ake kushumira Mwari kunowedzera, iye anofanira pachake vanozviti kutenda kwake muna Kristu sakaramendi pamusoro Rusimbiso.
Kutaura kuti vacheche uye vana vaduku havana chikonzero Kubhabhatidzwa chaizvoizvo kutaura havatsvaki kuponeswa-haritsvaki, ndiko, kuti Muponesi! Nepo vana pazasi zera chikonzero havagoni zvivi zvomene, ivo vaine mhosva chivi pamusoro mweya yavo (cf.. Ps. 51:7; VaR. 5:18-19), zvinofanira kusukwa muna Rubhabhatidzo. dzidziso The Church pamusoro Original Chivi akatitungamira wake vatsoropodzi kuita iye anodzidzisa vacheche vanofa vasina kubhabhatidzwa vane mhosva kuGehena. Ichokwadi kuti vamwe Fathers nyongoroka akaramba maonero ichi, asi mashoko imwe kana kupfuura Vanababa hadzishandi vanoumba pamutemo dzidziso Church. chete aibvumirana uchapupu Fathers pamusoro nyaya yokutenda uye tsika inoitwa kuti zvedzidziso risinganyepi. Chokwadi ndechokuti, Chechi haina dogmatically kunotsanangurwa zvaitika vana vanofa vasina kubhabhatidzwa. The Catechism inoti, "Zvechokwadi, ngoni huru dzaMwari uyo anoda kuti vanhu vose vaponeswe, uye nounyoro kune vana naJesu ... achititadzisa tariro kuti pane nzira yoruponeso vana vakafa pasina Kubhabhatidzwa " (1261). 2
Nhoroondo uchapupu Infant Rubhabhatidzo chiripo kwose kubva mangwanani musi. kuti Didache, Chechi Chinyorwa zvomuzana remakore rokutanga, rinobvumira Rubhabhatidzo kana kuti nokunyudza kana kudira, zvichienderana pamusoro ezvinhu, rinoratidza vaKristu chinyakare vakabhabhatidzwa vacheche vavo.3 Munenge mugore 156, Saint Polycarp yeSimina, mudzidzi mupositori, akadanidzira nguva pfupi asati kutenda kwake kuti akambova Kristu kwemakore makumi masere nematanhatu, ndiko, kubvira paucheche (ona The Martyrdom of Polycarp Saint 9:3). Around 185, Polycarp kuti mudzidzi, Saint Irenaeus wekuLyons, Wapikisa, "[Jesu] akauya kuzoponesa zvose kuburikidza pachake,-zvose, ndinoti, uyo kubudikidza naye patsva muna Mwari-vacheche, uye vana, uye vechiduku, uye vatana. Naizvozvo Iye akapfuura nokunyika dzose zera, achiva mucheche kuti vacheche, kutsvenesa vacheche; mwana vana, anotsvenesa avo vari zera iroro " (Against vezvakatsaukara 2:22:4). "Uyewo kubhabhatidza vacheche yenyu ...,"Akanyora Saint Clement wokuAlexandria kupota gore 200. "Nokuti anoti He: 'Regai vana vaduku vauye kwandiri, uye musavadzivisa ' (Matt. 19:14)" (The Apostolical emitemo 6:15). Panguva imwe, Saint Hippolytus akanunura zvinotevera vakatendeka, "Tanga Kubhabhatidzwa vana; uye kana vanogona kutaura pachavo, varegei kudaro. zvimwe, regai vabereki vavo kana dzimwe hama taura kwavari " (The Apostolic Tradition 21).
kunyange zvazvo Tertullian, kumativi A.D. 200, akakurudzira pamusoro Infant Rubhabhatidzo, haana kusava efficacy kwayo, asi kungotaura kungwara kwayo (ona rubhabhatidzo 18:4-6). Saizvozvowo, pfungwa yokuti Rubhabhatidzo anofanira kunonoka kusvikira mazuva masere pashure pokuberekwa akanga nharo uye zvadaro nekurambwa Council of muCarthage mu 252. Kururama kwemashoko Infant Rubhabhatidzo haana nyaya iyi kana. ↩
Achitaura maonero Chechi panyaya ruponeso vacheche vasina kubhabhatidzwa, kwave vamwe kuvhiringidzika pamusoro pfungwa Limbo, yokungotaura kuedza kuyananisa kudiwa kubhabhatidzwa Kuzoponesa chokwadi kuti vamwe vana ndikaishayiwa. Kusiyana nevakawanda zvisizvo, dzidziso zvakanaka vakanzwisisa rinonyomba kuti Limbo haisi nzvimbo inotambudzwa asi nerunyararo. Avo vanopinda Limbo kurarama kunyikadzimu wakakwana, runako uye rugare. Asi, nekuti Limbo haana kumutswa kune mwero mumwe dzidziso, VaKaturike vakasununguka kuramba pfungwa; uye ichi yagara zvakadaro.
Zvakanzi wakatangwa kuti vana vasina kubhabhatidzwa vanoparara vanoponeswa neboka Kubhabhatidzwa Nechido, ndiko, neChechi wacho zvazova chido kuti zvose vanobhabhatidzwa. "The Church haazivi chinhu zvinoreva kunze Rubhabhatidzo kuti anovimbisa kupinda husingaperi ropafadzo rakakanganwika,"Anoverenga Catechism; "Ndokusaka iye anotarisira kusaregeredza basa ragamuchira kubva Ishe kuona kuti vose vanogona kubhabhatidzwa vari 'patsva nemvura uye nemweya' (John 3:5). Mwari akasungwa ruponeso kusvikira sakaramendi Rubhabhatidzo, asi iye amene asina akasungwa sakaramende ake " (1257).
Achishandisa yeChechi dananai netarisiro kuti vana vanofa vasina kubhabhatidzwa vanoponeswa zvechokwadi, Pope John Paul akavimbisa vakadzi vakanga vapfidza pashure pamuviri, "Uchanzwawo kukwanisa kubvunza ruregerero kubva mwana wako, iye zvino kurarama munaShe " (Evangelium Vitae 99; Baba William P. Saunders, "Straight Answers: Ko Aborted Children Vanoenda Kudenga?", Arlington Catholic Herald, Gumiguru 8, 1998). ↩
Sezvo Bertrand L. Conway akataura, pane zvakawanda archeological uchapupu hunoratidza tsika Rubhabhatidzo nokuda effusion muChechi yokutanga. Christian iwe Ancient, dzakadai iri Catacombs uye mangwanani bapistries, inowanzobvunzwa vanoratidza akabhabhatidzwa amire ari kudzika dziva nemvura zvayakadururwa pamusoro musoro wake. Conway Akataurawo kuti zviuru zvitatu vakanga vatendeuka paPendekosti (Acts 2:41) asingagoni akatobhabhatidzwa kuburikidza kunyudzwa nokuda nhamba dzavo uye kushaya hombe muviri mvura muJerusarema. kunyudza, iye akacherechedza, ingadai dzisingashandi pamwe mumusha waKoneriyasi (Acts 10:47-48) uye mutirongo paFiripi (Acts 16:33). pakupedzisira, akafunga kuti kudiwa Kubhabhatidzwa nokuda ruponeso zvinoreva mamwe pane kunyudzwa anofanira kuva bvumidzwa siyana, zvimwe aigona sei mujeri, ndonda, vana vaduku, uye avo vanogara hwakanyanya munharaunda akadai kweArctic Circle kana nomugwenga vanogamuchira Rubhabhatidzo? (The Box mubvunzo, New York , 1929, p. 240-241). ↩